सर्बेन्द्र खनालको गतिबिधिले गर्दा पूर्व प्रहरी भन्न पनि लाज लागेको छः रमेश खरेल – Butwal Sandesh
सर्बेन्द्र खनालको गतिबिधिले गर्दा पूर्व प्रहरी भन्न पनि लाज लागेको छः रमेश खरेल
काठमाडौं। समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादबलाई अ*पहरण शैलीमा काठमाडौैं ल्याइएको घटनामा संलग्नमाथि का’रबाहीको माग बढेको छ । सो पार्टीका नेता, नेपाली कांग्रेस र नागरिक समाज मात्र होइन पूर्व प्रहरी अधिकारीबाट समेत अनुसन्धानको माग हुन थालेको छ । सो घटनामा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संलग्न थिए । पार्टी फुटाउन एक सांसद नपुगेको अवस्थामा डा.यादबलाई मन्त्री दिने प्र*लोभनमा पारी जब*रजस्ती काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
अवकाशको दुई महिनापछि नै यस्तो घटनामा संलग्न भएपछि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनालको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उनका सहकर्मी समेत रहेका पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले समेत यसको छानबिन र का*रबाहीको माग गरेका छन् । यो घटनाले पूर्व प्रहरीको समेत शिर निहुरिएको बताएका छन् । योहो टिभीसँगको अन्तर्वातामा खनालले भनेका छन्–नेपाल प्रहरीमा म २९ वर्ष सेवा गरेको हिसाबले नेपाल प्रहरीबाट भर्खर अवकाशप्राप्त उच्च पदमा पुगेको मान्छेको गतिविधि बजारमा देखिएको छ, त्यसको बारेमा यहाँले मलाई सोध्नुभएको छ ।
म के भन्न चाहन्छु भने मान्छेलाई एउटा ह्याबिट बसिसकेपछि त्यही काम गरुँ गरुँ लाग्छ । उहाँको इतिहास हेर्दाखेरी उहाँ सुरुदेखि नै पावर सेन्टरलाई रिझाउन खोज्ने, लम्पसारवादमा तल्लिन हुने र कसरी आफ्नो फाइदा हुन्छ भन्नेमा सधैं लागिरहनुभएको थियो । उहाँ सर्वोच्च पदमा पुग्नुभयो । उहाँलाई बधाई छ धन्यवाद छ । तर, अवकाश भइसकेपछि पनि उहाँलाई खुल्दुली भयो । अब कसरी फेरि पावर सेन्टरलाई रिझाउने ? कसरी अर्को पदमा जाने ? अहिले पूर्व राज्यमन्त्रीलाई तराईबाट काठमाडौं ल्याएर एक किमिसको खुरापाती काममा लिडिङ रोल उहाँले प्ले गर्नुभएको आरोप लागेको छ ।
यसको प्रमाणित गर्ने आधिकारीक व्यक्ति म होइन । सम्बन्धित अधिकारीहरुले अनुसन्धान गर्नेछन् । मलाई लाग्छ यसको उचित छानबिन हुन्छ ।अहिले मलाई पूर्व प्रहरी भन्न पनि लाज लागेको छ । नेपाल प्रहरीको शिर गिरेको छ । हिजाको दिनमा नेपाल प्रहरीका सदस्य विभिन्न काण्डमा मुछिदा हाम्रो शिर झुक्थ्यो । अहिले मास्क लगाएर हिड्ने बेलामा समेत हामी पूर्व प्रहरीको समेत शिर निहुरिएको छ ।
पूर्ण पाठ भिडियोमा हेर्नुहोस: